टिएरा, एलो मोरेनो द्वारा: हुकिंग पावर, सरलता र मौलिकता | वर्तमान साहित्य
टिएरा, एलो मोरेनो द्वारा
जुआन अर्टिज | | लेखकहरू, किताबहरु, नोभेला
२०२० मा, स्पेनिश लेखक एलोई मोरेनोले आफ्नो उपन्यास प्रस्तुत गरे पृथ्वी, दुई भाइहरू र उनीहरूको बुबाले उनीहरूलाई दिने वचनको बारेमा एउटा कथा। यस कथानकले टेलिभिजन र मनोरन्जनको पछाडि असाधारण दुनियाको बारेमा देखाउँदछ जुन एक ग्रहमा देखिएको छ अन्तत: लेखकले दुई कथाहरू बीचको सम्बन्ध देखाउन एक जोडदार कथा प्रयोग गर्दछ।
केही साहित्यिक आलोचकहरूले यस समकालीन उपन्यासको विषयगत वास्तविकता र उपन्यास शैलीगत विशेषताहरू हाइलाइट गरेका छन्। र यो कमको लागि होइन, टेलिभिजन वा सामाजिक नेटवर्क जस्ता तत्वहरू प्लटको विकासमा निर्णायक हुन्छन्। यो कारणले, पृथ्वी पाठकको जटिल र विरोधाभासपूर्ण मानव स्थितिमा पुग्ने एक बरु सहज तरीका प्रतिनिधित्व गर्दछ।
1 एलोय मोरेनो द्वारा टियराको सारांश
1.1 खेल पुनः सुरु भयो
2.1 मानवता को वर्तमान को बारे मा एक पुस्तक
2.2 गहिरो प्रतिबिम्ब को लागी एक रमाईलो पाठ
3 पुस्तकको बारेमा राय
4 लेखकको बारेमा, एलोई मोरेनो
4.2 एलो मोरेनोको किताबहरू
को सार पृथ्वीएलो मोरेनो द्वारा
टेलिभिजन र मनोरन्जन उद्योगमा धेरै शक्ति भएको मानिस आफ्ना दुई साना बच्चाहरूलाई एक दुर्लभ वाचा दिन्छ, नेली र एलन। विशेष रूपमा, प्रस्ताव यो छ यदि यी भाइहरूले खेल समाप्त गरे भने, उनीहरूको बुबाले उनीहरूलाई सबै भन्दा मन पराउने इच्छा पूरा गर्नुहुनेछ। जे होस्, खेल अवरुद्ध भयो: आँखा झिम्केमा तीस वर्ष बित्यो, र तिनीहरूसँग परिवारमा ठूला परिवर्तनहरू हुन्छन्।
पृथ्वी (संस्करण बी)
खेल पुनः सुरु भयो
Ya परिपक्व उमेर मा, नेली सेल फोन, एउटा औंठी र कुञ्जी समावेश गरिएको एक रहस्यमय बक्स प्राप्त गर्दछ। मोबाइलका लागि धन्यबाद, उनी आफ्नो भाइसँग पुनर्मिलन भएकी छिन् (जससँग उनले बोल्दिन) र अधूरो खेल फेरि शुरू गर्दछ। नायकले उनको चाहना पूरा गर्ने अवसर यही हो, किनकि एलनले धेरै समय अघि नै यो हासिल गरिसकेका थिए।
उही समयमा, खेल एक संग लिंक गर्न गइरहेको छ वास्तविकता टेलिभिजन कार्यक्रम छ कि यसको विकास को लागी सम्पूर्ण दुनिया सजग छ। यो कार्यक्रम मंगलवार ग्रहमा पृथ्वीबाट जाने आठ मानिसहरुका वरिपरि घुम्छ। यसैबीच, आइसल्याण्डमा, नेल्ली र उनको भाइ खतरामा परेका ग्रहमा विरोधाभासपूर्ण मानव अवस्थाको बारेमा तथ्यहरू खुलासा गर्न सिक्छन्।
यो कितिब अरूसँग मिल्दोजुल्दो कहानी मात्र बताउँदैन, तर पनि वर्तमान वास्तविकता को बारे मा एक स्थिर चिंतनशील राज्य प्रस्ताव। यसै गरी, वैकल्पिक कथाहरूको साथ छोटो अध्यायमा संरचित कथा शैलीले अर्को पृष्ठमा हुने घटनाहरूको बारेमा पाठकहरूको उत्सुकता बढाउँदछ। Eloy Moreno उपलब्धि भन्दा बढी तपाईंको उद्देश्य दर्शकलाई किनारमा राख्नुहोस्.
स्पष्ट रूपमा, लेखकको शर्त उपन्यासको दुई केन्द्रीय कथाहरूमा निहित दुर्लभतालाई पाठकलाई मज्जा दिनको लागि हो। त्यो हो, ती दुवै दाजुभाइहरू जसले एक-अर्काबाट एक वचन पाउने र हुर्काउने, साथै टेलिभिजन कार्यक्रमका सहभागीहरूको पनि। अन्तत: ती सबै जीवनहरूमा साझा पृष्ठभूमि एकदमै बिस्तारै खोजी हुँदैछ।
मानवता को वर्तमान को बारे मा एक पुस्तक
यसको ताजा र एकदम अप-टु-डेट परिप्रेक्ष्यको लागि, पृथ्वी तपाईले पढ्न सुरू गरेपछि तल राख्नु गाह्रो पुस्तक हो। यो नविकरण शैलीबाट, एलोई मोरेनोले यो विषय एक्सएक्सआई शताब्दीका लागि चिह्न मिल्ने संचारात्मक फारमहरूको साथ बेग्लाबेग्लै छ। पाठमा, ध्यान हाइपरकनेक्शनले चिह्नित गरेको समय देखि देखी मानव स्थितिमा पर्दछ।
थप रूपमा, धेरै गाह्रो विषयहरूलाई मिक्स मार्फत सम्बोधन गरिएको छ - धेरै मूल, जसरी - धेरै स्पष्ट तर्कको साथ प्रत्यक्ष क्रिया। विषयहरूले अन्वेषण गरेका विषयहरू मानव द्वारा यस ग्रहमा हुने पर्यावरणीय क्षतिदेखि लिएर सामाजिक नेटवर्कहरूबाट लगाइएको नैतिक दृष्टिकोण (स्पष्ट रूपमा) सम्मका छन्।
गहिरो प्रतिबिम्ब को लागी एक रमाईलो पाठ
En पृथ्वी, एलो मोरेनोले संलग्नता पैदा गर्न र पाठकहरूको समानुभूति जगाउन सक्षम भएको कथन धेरै पर्दा र बाहिरबाट आश्चर्यजनक बनाउँदछ। तिनीहरू सबै, कुनै न कुनै समयमा, एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा बन्छ। तपाईं उपन्यास को पछाडिको कभर मा पढ्न सक्नुहुन्छ, तपाईं सत्य खोज्न चाहानुहुन्छ, तर, "सत्यलाई खोज्ने समस्याले यसलाई पत्ता लगाइरहेको छ र के गर्ने थाहा छैन।"
यी कारणहरूको लागि, यो छ एक पुस्तक जसले तपाईंलाई पात्रहरूको वास्तविक जीवनको खोजी गर्न आमन्त्रित गर्दछ, र सायद आशा गर्दछ, पाठकले उनीहरूमा झल्काउँछ। त्यो बाटोमा पृथ्वी एलो मोरेनोद्वारा पाठकहरूलाई मानव अवस्थाको सबैभन्दा जटिल अंशमा ल्याउने प्रयास गर्दछ।
पुस्तकको बारेमा राय
उपन्यासको मूल प्रारम्भिक खुलासा भएता पनि आलोचकले एलो मोरेनोको पाठकको चासो राख्ने क्षमताको प्रशंसा गर्छन्। केहि आवाजहरू, अर्कोतर्फ, "उत्कृष्ट विक्रेता सरल ", पुस्तकको अनुमानित (सरल) व्यावसायिक संरचनाको कारण। जे भए पनि, बारेमा सबै मूल्यांकन पृथ्वी तिनीहरू सत्य हुन्: हुकिंग शक्ति, सरलता र मौलिकता.
लेखकको बारेमा, एलोई मोरेनो
एलो मोरेनो प्रबन्ध सूचना इन्फोलेटिक्सका एक प्राविधिक अभियंता हुन् जसले जनवरी १२, १ 12 .1976 मा कास्टेला डे ला प्लाना, भ्यालेन्सियन समुदाय, स्पेनमा जन्म। ऊ आफ्नो गृहनगरमा जौमे I विश्वविद्यालयको स्नातक हो। यद्यपि उनले कम्तिमा स्नातक गरे पनि उनले कम्प्युटर क्षेत्रमा काम गर्न थाले तर उनको जीवन साहित्यमा समर्पित छ.
र 2011, उसको जोशले उनलाई पत्रहरूको संसारमा प्रवेश गर्न उक्सायो उनको पहिलो पुस्तकको उद्घाटन (स्व-प्रकाशित), हरियो जेल कलम। यो पाठ एक अप्रत्याशित रूपमा सफल साहित्यिक शुरुवात भयो, जसले उसको उत्तरवर्ती प्रकाशनहरूको प्रसारलाई सजिलो बनायो। हुनसक्छ, जनता बीच यसको अधिक स्वीकृति यसको atypical लेखन को कारण हो।
पछि को प्रकाशन उनको पहिलो, र पाठकहरूको ठूलो स्वागत, एलोई मोरेनो धेरै बढावा लिएको छ। त्यस बेला देखि, स्पेनिश लेखक आफ्नो रचनात्मक साहित्यिक काम रोकेको छैन, विशेष गरी कथाहरू र उपन्यासहरू।
अर्कोतर्फ, लेखक प्रख्यात भएको छ - सामाजिक मिडियामा यसको बलियो उपस्थिति बाहेक - किनभने ऊ साहित्यिक मार्गहरू डिजाइन गर्दछ। मोरेनो, एक वर्षमा दुई वा तीन पटक, उनले जहाँ उपन्यासहरू राखेका थिए त्यहाँ मानिसहरूलाई यात्रा गर्छन्। यसको साथसाथै, उनले साहित्य पाठ्यक्रम र कार्यशालाहरू सिकाउँछ, साथसाथै उनको देशमा साहित्यिक प्रतिस्पर्धामा निर्णायकको रूपमा भाग लिन्छन्।
एलो मोरेनोको किताबहरू
पछि हरियो जेल कलम (२०११), एलोय मोरेनो प्रकाशित मैले सोफा मुनि के फेला पारेँ (2013), अर्को प्रकाशन सफलता धेरै भाषाहरूमा अनुवाद गरियो। पछि, क्यास्टेलन लेखक प्रकाशन गर्न डेस्कटप प्रकाशनमा फर्के कथाहरू विश्वलाई बुझ्न (2015)जस मध्ये, यसले क्रमशः २०१ 2016 र २०१ in मा दोस्रो र तेस्रो भाग सुरू गर्‍यो।
यस बीच, मोरेनो २०१ his मा उनको तेस्रो उपन्यास प्रकाशित, उपहार, त्यो पनि एक सफलता मा परिणाम तत्काल, सीमित संस्करणको बावजुद। त्यस्तै, उपन्यास अदृश्य (2018) उत्कृष्ट बिक्री आंकडा प्राप्त। व्यर्थ होईन, यससँग १ 19 संस्करणहरू छन् र धेरै अनुवादहरू छन्। एलो मोरेनोबाट भर्खरको हो पृथ्वी (2020)।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » लेखकहरू » टिएरा, एलो मोरेनो द्वारा
आर्टुरो सान्चेज सान्ज। बेलिसारियसका लेखकसँग अन्तर्वार्ता: पूर्वी रोमन साम्राज्यको मजिस्टर मिलिटम
जोसे क्याल्भो पोयाटो। La travesía Final का लेखकसँग अन्तर्वार्ता